साहस ऊर्जाको खुल्यो आइपीओ, कति कित्ता भर्नु उपयुक्त ? » aarthikplus
साहस ऊर्जाको खुल्यो आइपीओ, कति कित्ता भर्नु उपयुक्त ?
वि.सं.२०७८ असोज ६ बुधवार ०९:२७
साहस ऊर्जा लिमिटेडले आज (१० बजे) देखि प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) विक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ७० लाख कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो ।
निष्काशित कुल सेयरमध्ये २ लाख १० हजार कित्ता (३ प्रतिशत) कर्मचारीहरुका लागि र ३ लाख ५० हजार कित्ता (५ प्रतिशत) सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी ६४ लाख ४० हजार कित्ता सर्वसाधरणका लागि छुट्याइएको छ ।
लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी आस्वा इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण शाखाका साथै मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीको आइपीओलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्राएनपी आईआर डबल बी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
कम्पनीले सर्वसाधरणलाई ६४ लाख ४० हजार कित्ता छुट्याएको छ । सो आधाारमा प्रति आवेदकलाई १० कित्ताले बाँड्दा ६ हजार ४४ हजार जनालाई मात्र सेयर दिन पुग्छ ।
News Views: 840
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ९७औं शाखा बीरगंजमा
नगरिक उड्डयन प्राधिकरणको निमित्त महानिर्देशक बनेका क्षेत्री को हुन् ?